အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီ့အမ ချက်တဲ့ ဂဏန်းဟင်း
ဟုတ်ပါတယ် ဂဏန်းမဆလာ ချက်ပါ ကဲ ရွာစားရေ ပရိတ်သတ်တွေ သွားရည်တမြားမြားကျအောင် စိန်ဗေဒါလေးနဲ့ပို့.......ပလို့ဂျိ
ကဲ ဒါကတော့ အကြီးအကျယ် သမကြတော့မယ် ပွဲပဲပေါ့ကွယ်။ နောက်နေ့တွေကျမှ လွယ်ကူမြန်ဆန် ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို အနောနိမတ်စ် တယောက်တောင်းဆိုထားတဲ့ အတိုင်းချက်ပေးပါအုံးမယ် ခုတော့ တီလဲနေမကောင်းနေတာနဲ့ ဒီလောက်ပဲနော်......
နောက်နေ့ကျမှ ဆရာမကြီး ကြည်လဲ့လဲ့ဦး တယောက် လုပ်ကျွေးတဲ့ တုတ်ထိုး တင်ပါအုံးမယ်နော် တာ့တာ...
Posted by တီချမ်း at 7:28 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အတို့အမြုပ်, အရွက်ကြော်, အသားကြော်
ဆုမြတ်မိုး July 1, 2011 at 9:51 PM
Snow July 1, 2011 at 11:06 PM
ဂဏန်းဟင်းထဲကို ဘာလို့ အခွံတွေ ထည့်တာလဲ။ လှအောင်လို့လား။ စားလို့လည်း မရဘဲနဲ့။
တရုတ် အမွှေးအကြိုင်ရော၊ ကုလား မဆလာရော ထည့်ချက်လို့ရတဲ့ ချစ်ကြည်ရေးဟင်းပေါ့နော။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ မြည်းကြည့်မှ သိမှာပဲ။
Evy July 2, 2011 at 12:11 AM
ဟင်းချက်နည်းတွေမျှော်နေတာကြာပြီ။ ညလယ်ခေါင်ကြီးမှာ ကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာသွားပြီ။
Iora July 2, 2011 at 12:45 AM
မအားလို့ မရေးဖြစ်တာအတော်ကြာ၊ ဒီရောက်တော့တီချမ်းလည်းမအားလို့ ဆိုတော့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ သိပ်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒညင်းကွက်မစားရတာကြာပေါ့။ ဖျားနေတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမြန်နေကောင်းပါစေ။
တီချမ်း July 2, 2011 at 1:27 AM
ဆုမြတ်မိုး.....ဒညင်းခွက်ကြော်စားချင်ရင် တီ ကိုလာ အိမ်လိုချင်ရင် ကြည်စိုး အိုင်စီအိမ်ဘုရင် ဆီကိုသွား.....
အရှည်ကြီး....အခွံပါထည့်ကြော်ရမှာပေါ့ မမရယ် ရှင်ဆိုတာလဲ ဘယ်ဂဏန်းဟင်း ကိုများ အခွံချွတ်ချက်တာ တွေ့ဘူးလို့ လဲ မြန်မာချက် ကုလားချက်ကိုပြောတာ
အီဗီ.....နောက်လာပါအုံးမယ် အေ ဝက်သား တုတ်ထိုး ဘာညာ ပေါ့ မျှော့်
အိုင်အိုရာ နောက်နေ့မှာ သေချာလာကြည့်မယ် တီလဲ မအား နေမကောင်း စာဘက်မလှည့်ဖြစ်တာ ကြာ....
rose July 2, 2011 at 5:45 AM
တီချမ်းရေ... ကွန်မန့် မရေးဖြစ်ပေမယ့် အမြဲ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တီချမ်းရဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ဆိုရင် မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂဏန်းဟင်းရော၊ ဒညင်းကွက်ကြော်ရော ကြိုက်တယ်။ ဓညင်းသီး မစားရတာ နှစ်နဲ့ ချီနေပြီး(
Anonymous July 2, 2011 at 6:12 AM
Want to eat crab curry.Sorry to know that you are not feeling well.Get well soon! Take care!
ုကျော်နှင်းဆီလွင် July 2, 2011 at 12:39 PM
load kya ver.load kya ver.
shin doe ka police twe vae.
watery in mouth, torture me with photos.
Margaret Joe July 3, 2011 at 1:18 PM
နန်းမတော်မိမိချမ်းတင်တဲ့ဟင်းတွေထဲမှာ ဒီဂဏန်းဟင်းကို အပြန် ၁၀၀၀ ကြိုက်တယ်အေ
နောက်လည်း မကြာမကြာ ဟင်းတွေချက် တင်ပါဦး
နွေးနေခြည် July 5, 2011 at 1:00 PM
ကျန်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ပါ တီ။ တီ ကျန်းမာမှ မိုတို ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ သိရမှာ ...း)))
တီချမ်း July 5, 2011 at 1:43 PM
အခုလဲ လည်ချောင်းတွေနာနေပြန်ပြီ မမခ ရေ တကယ်ပဲ
ကိုပေါ January 16, 2012 at 8:05 AM
Look delicious. :-)
ကိုပေါ January 16, 2012 at 8:08 AM
ကိုပေါ January 16, 2012 at 8:14 AM
Sarr Chin Lar Pyi Naw :-)
တီချမ်း January 16, 2012 at 8:22 AM
စားချင်ရင် ဘန်ကောက်လာလေ ငှဲငှဲ